वेद के हो ? चारै वेदको सङ्क्षिप्त परिचय-Brtnepal.com
वेद के हो ? चारै वेदको सङ्क्षिप्त परिचय
विआरटि नेपाल सम्बाददाता
वेदहरूमा सर्वप्रथम ऋग्वेदको निर्माण भयो । यो पद्यात्मक छ । यजुर्वेद गद्यात्मक छ भने सामवेद गीतात्मक छ । ऋग्वेदमा १० मण्डल, १०२८ सूक्त र ११ हजार मन्त्र छन् । यी मन्त्रहरूमा देवताको स्तुति गरिएको छ । यी मन्त्रले देवताहरूलाई यज्ञमा आह्वान गर्दछन् । यसका पाँच शाखा छन् : शाकल्य, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन र मण्डूकायन । ऋग्वेदमा मृत्युनिवारक त्र्यम्बक मन्त्र वा मृत्युञ्जय मन्त्र (७/५९/१२) वर्णित छ । विश्वविख्यात गायत्री मन्त्र (३/६२/१०) पनि यहीँ छ । ऋग्वेदमा अनेक प्रकारका लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त विद्यमान छन् । रोगनिवारक सूक्त (१०/१३७/१—७), श्रीसूक्त वा लक्ष्मीसूक्त (खिलसूक्त), नासदीय सूक्त (१०/१२९/१—७) तथा हिरण्यगर्भ सूक्त, विवाह सूक्त आदिको वर्णन छ जसमा ज्ञान र विज्ञानको चरमोत्कर्ष देख्न पाइन्छ ।
सामवेद मा गाउन मिल्ने छन्दहरू छन् । यिनको गान यज्ञको समयमा हुन्छ । यस वेदमा १८२४ मन्त्र छन् र ७५ मन्त्रबाहेक अन्य सबै ऋग्वेदबाट नै लिइएका हुन् । तैपनि यसको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ । श्रीमद्भगवद्गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले ‘वेदानां सामवेदोsस्मि’ भनेर यसको महत्वलाई उजागर गर्नुभएको छ । सामवेद आकारमा सानो भए पनि यो सबै वेदको सारस्वरूप रहेको छ र सबै वेदका प्रमुख अंश यसमा परेका छन् । सामवेद ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगको त्रिवेणी हो । यो वेदलाई संगीतशास्त्रको मूल मानिन्छ । यसमा सविता, अग्नि र इन्द्र देवतालाई प्रधानता दिइएको छ । यसमा यज्ञमा गाउनका लागि संगीतमय मन्त्र राखिएका छन् । मुख्यतः गन्धर्वहरूले यसको गान गर्छन् ।
यसमा मुख्य तीन शाखा र ७५ ऋचा छन् र संगीतशास्त्रलाई प्रधान बनाइएको छ ।
यसमा यज्ञको असल प्रक्रियाका लागि गद्य मन्त्र समावेश गरिएको छ । विशेषगरी क्षेत्रीहरूका लागि यो वेद महत्त्वपूर्ण छ । यजुर्वेदका दुई शाखा छन् । नेपाल र उत्तर भारततिर शुक्लयजुर्वेद अनि दक्षिण भारततिर कृष्णयजुर्वेद प्रचलित छ । यसमा ४० अध्याय छन् । यो वेदमा अधिकांशतः यज्ञ र हवनको नियम र विधान छन् । त्यसैले यो कर्मकाण्डप्रधान ग्रन्थ हो । यसमा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन लगायतका यज्ञको विस्तृत विवरण दिइएको छ । विश्वविख्यात गायत्री मन्त्र र महामृत्युञ्जय मन्त्र यसमा पनि पाइन्छन् । यसमा दिव्य वैद्यशास्त्र र कृषिविज्ञानका विषय पनि समाविष्ट छन् ।
यसमा देवताहरूको स्तुतिका साथसाथै जादूसँग सम्बन्धित मन्त्र र तन्त्र, राक्षस, पिशाच जस्ता भयानक शक्तिका बारेमा वर्णन गरिएको छ । यसका अलावा यसमा चिकित्सा, विज्ञान र दर्शन सम्बन्धी मन्त्रहरू पनि पाइन्छन् । भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जडीबुटी, आयुर्वेद, प्रजनन विज्ञान अर्थशास्त्र, राजनीति, राष्ट्रियता लगायतका धेरै विषय यसमा अटाएका छन् । मुख्यतया व्यापारीहरूका लागि यो वेदको महत्त्व छ । यसमा २० काण्ड छन् । लोकान्तरबाट
Published on August 18, 2016 at 9:06 am
सनातन धर्म – प्रा. डा. नारायण कुँवर
चेतनाको क्रान्ति गर्दै सुखको सङ्ग्राम जितौं
महाभारत पुराणमा आधारित -“हतियार र शक्तिको पहिचान “
कर्मबन्धनबाट मुक्ति हुने भगवान् बुद्धको तरिका भिन्दै
साधनाका चार चरणहरू
हिन्दु धर्मका दर्शन, बुद्ध धर्म र ओशो
आधुनिक दुनियाँंलाई सफल बनाउने भागवतका केही आदर्श सूत्रहरू
हिन्दु धर्मका अत्यन्त रहस्यमयी १० ज्ञान……..थाहा पाइराखाैँ
पंचकोशसंगको तादम्यता नहटाएसम्म आत्मज्ञान हुँदैन
संविधान संशोधन नभएपनि निर्वाचनमा जानुपर्छ -वर्षमान पुन
टेक्सस राज्य ‘सुरक्षित क्षेत्र’ घोषणा भएसंगै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका बसिरहेका आप्रबासीको त्रास हट्दै
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको जीवनकथा
‘भूकम्प पिडितको नाममा उठेको रकम हिनामिना गरेका छैनौं’-वासिंगटन स्थित नेपाली दुतावास
तेरियाको ईच्छा बलिउड फिल्म खेल्ने, नायक ऋतिक रोशनले गरे अफर
फेसबुकको चिनजान अश्लील हर्कतमा बदलिएपछि यसरी ठगिर्इंदै छन् महिला !
सडक बिस्तारको क्रममा हेटौंडामा झडप, प्रहरी घाईते
सन २०१६ का अमेरिकामा रहेका चर्चित १० नेपाली भाषी भूटानीहरु
तिब्बती शरणार्थी बनेर अमेरिका जान लागेका एक नेपाली पक्राउ
अमेरिकामा २ लाख ३१ हजार १४३ नेपालीहरू
Aurora Co 80047 USA Tel: 1- 720 222 3420 ( Voicemail only) email: [email protected]